Abacebisi beeFundo bavame ukujongana ne-Ax yokungafuni ukuhlaziya iiPhepha zeZikolo eziPhakamileyo
I-Press Advocate Advocate Sees iphakama kwiinkqubo zokuCandwa
Kwizikolo eziphakamileyo kulo lonke ilizwe, abacebisi abaninzi beengcali kumaphephandaba omfundi kunye neencwadi zonyaka baye babelwa kwakhona okanye baxoshwa ngenxa yokungafuni ukubhala iincwadi zabafundi.
Utsho uFrank D. LoMonte, umlawuli olawulayo we-Student Press Law Centre, iqela lokukhuthaza abafundi bamaphephandaba. ULoMonte uthi ubona iphephandaba le-high school kunye nabacebisi beencwadi zonyaka baxoxwa ngokubhekiselele kwimicimbi yokucwangcisa.
"Izikolo ziyaba nobudlova ngokugxotha ootitshala abahluleka ukugubha abafundi ngokufanelekileyo," utsho uLoMonte.
Umcebisi kwiphepha lezemfundo e-Forest Grove High School e-Oregon wabelwa ukuba afundise iklasi yokufunda yokulungisa emva kokuba isikolo sithole isikhalazo malunga nomcimbi owawuquka iphepha elibonisa izifihla ezingachazwanga zihanjiswe ngabafundi.
Kwakhona e-Oregon, umnqophiso wephephandaba le-North Douglas, umcebisi wephephandaba i-Loradona May, akazange ahlaziywe emva kokuba iphepha lomfundi lenze i-editorial ngokubaluleka kwekhowudi yokugqoka yesikolo. Isikolo sathetha ukuba uhleli luphule umgaqo-nkqubo webhodi yesikolo inkululeko yokuthetha. "I-Oregon ineemimiselo yomgaqo-nkqubo ekhusela inkulumo yabantwana, ngoko yaxoshwa ngokuhambisana nomthetho welizwe," uLoMonte amanqaku.
E-Indiana, iNcwadi yeNcwadi yaseNkightstown High School kunye nomcebisi wephephandaba laxoshwa emva kokuphikisana ngokubandakanya icandelo kwincwadi yencwadi malunga nabafundi abakhulelweyo.
E-Texas, umcebisi wephephandaba lomfundi kwi-Big Spring High School ushiye phantsi kwengcinezelo emva kokuba inqununu ithathe umxholo wokugqibela wephepha, okubandakanya umhleli okhuthaza ukugunyazwa kwegciwane.
Ngaphantsi kwesigqibo seNkundla ePhakamileyo se-1988 i-Hazelwood School District v. Kuhlmeier, iimpapasho ezixhaswe zizikolo eziphakamileyo zingaqwalaselwa malunga nemiba "ehambelana ngokufanelekileyo neengxaki zokufundisa ezifanelekileyo." (Amaphephandaba ekholeji, ngakolunye uhlangothi, ngokuqhelekileyo anokunandipha ukukhuselwa kokuQala okuPhambili, ngokukodwa kwizikolo ezixhaswa ngemali.)
Kodwa, uLoMonte uthi, "Kucacile (kwimeko yaseTexas) ukuba umhleli okhuthaza ukutshintsha komthetho inkulumo yentetho yezopolitiko ekhuselekile nakwizikolo esiphakamileyo. Ukuba umcebisi usususile loo mpendulo uya kuphula umthetho . "
ULoMonte uthi ubona i-uptick kwi-firings enjalo ngexesha lokugqiba. "Kuhlobo lwexesha lexesha." Ngaloo nto iincwadi zonyaka ziphuma, xa izikolo ziceba ukuwa kwaye zigqibe ukuba bangaphi abafundisi abayidingayo kwaye banikezele izaziso zokuvuselela okanye cha. "
Wongeza ngelithi: "Into esiyibonayo ngeli xesha lonyaka yinkalo echaphazelekayo yootitshala abaxelelwa ukuba abayi kuphinda babuyele ngoSeptemba. Ixesha eliphantse liphindiselela ekutheni inkulumo yomfundi ephantsi kokukhuselwa kwesiTshintsho sokuQala ."
Utsho ngohlahlo lwabiwo-mali oluchaphazela izithili zesikolo lonke, abalawuli basebenzisa iindlela zokunciphisa indleko njengento yokukhupha abacebisi bephephandaba labafundi, uthi.
"Ndicinga ukuba uqoqosho lunikeza izizathu ezithile ezifanelekileyo zokuba izikolo zilahla iincwadi zokubhala zengxelo eziphezulu ezixakekayo ezifuna ukutshisa," esho. Into eyona nto elula ehlabathini ukugxeka uqoqosho ngokususa utitshala owawufuna. "
ULoMonte uthi iqela lakhe lifumana izikhalazo eziliwaka eziliqela ngonyaka malunga nokunyanzeliswa kwamaphepha ephakamileyo esikolweni.
"Kodwa amava ethu kukuba uninzi lwabafundi besikolo esiphakamileyo luyesaba ukukhalaza kwaye aluqondi ukuba banamalungelo," utsho. "Siyazi ukuba xa sithatha izikhalazo ezi-1 ngonyaka kunyathelo lokucwaninga, inamba yangempela kufuneka ibe ngamaxesha angama-10."
Ininzi yezikhalazo "zisekelwe ngokufanelekileyo," uyongezelela. "Yinyathelo elihle kakhulu kumntu oneminyaka engama-16 ubudala ukuba abize igqwetha kwaye xa libiza ngokuqhelekileyo lihlola."
Iindaba ezi-10 zeendaba eziphezulu ze-2010
Funda Yimbali Yembali
Nantsi yonke into ofuna ukuyifumana ngokubhala ezibalulekileyo iingcebiso
Iindaba ezi-10 zeendaba eziphezulu ze-2011
Indlela yokubhala i-News Compelling, Informative News Lede
Ziziphi iindlela ze-Mainbars kunye neeBarbari ezisetyenzisiweyo kwiNgcaciso yeendaba
AbaHleli abalungileyo kufuneka bahlawule ingqalelo kwiinkcukacha, kodwa bangafaki i-Big Picture
Indlela Ongayifumana Ngayo Iindinyana Zeendaba Ukumboza Kwilizwe Lenu
Iisiseko zoBucala boBucala boBucala
Ingqwalasela kaMelissa McCarthy
Iifayili eziLawulayo ziSebenza njani? Kutheni Baya Kuvuza?
Indlela yokudibanisa "Ukupheka" (ukugubha, ukuya kwiqela) ngesiFrentshi
Indima kunye Nezakhono zoMhleli weMculo
Imfazwe Yobundlobongela: I-USS Pueblo Yenzeke
I-Top 10 ze-Skateboard Movies
Iimbali zamaThala zeKatatonia
Inkcazo yePropati enzulu kunye nemizekelo
2016: Unyaka Wokubuyiselwa kootitshala abaPhezulu
Indlela yokubeka ukutshabalalisa ixesha
I-Yaxchilán - I-Classic Maya City-State eMexico
Incwadi yokuqala yePiano: Isifundo esisodwa
Igalari yeAlicia Sacramone Imifanekiso
Uhlalutyo lweNgcaciso yokuHlola
Iingcebiso zeTipi, iiArchaeological Rest of Tipis
Indlela yokudibanisa "Detendre" (ukukhupha, ukulahla, ukukhulula)
Qinisekisa i-recibo ye-documento o ku-USCIS
I-Biography kunye neProfayili kaJigoro Kano
Yayiyiphi inkqubo ye-ABT Braking System?
Ukusebenzisana Neengxaki zePlanga kunye neengxaki zeSapsucker
Ukwenza iNgqungquthela yeKlasi yeDrama
Iintsingiselo kunye nokuchazwa kweziNdlo eziqhelekileyo
IPyyote kunye neNative American Church